बारा र पर्सामा हावाहुरीको वितण्डा, कयौँको मृत्यु, सयौँ घाइते ; ओलीको ट्विटले के भन्छ ? – www.agnijwala.com
बारा र पर्सामा हावाहुरीको वितण्डा, कयौँको मृत्यु, सयौँ घाइते ; ओलीको ट्विटले के भन्छ ?
चैत १७ काठमाडौँ आइरहेका डोमेस्टिक विमानहरु विराटनगरमा ल्यान्ड भए। यो त सामान्य खबर थियो। राति अबेर पो बल्ल खबर आयो, तराईको बारा र पर्सामा त हावाहुरीले वितण्डा नै मच्चाएछ।